TAALIBAAN oo sharci cusub kusoo rogtay gabdhaha saxafiyiinta ee Afghanistan - Caasimada Online
Home Dunida TAALIBAAN oo sharci cusub kusoo rogtay gabdhaha saxafiyiinta ee Afghanistan
TAALIBAAN oo sharci cusub kusoo rogtay gabdhaha saxafiyiinta ee Afghanistan
Kabul (Caasimada Online) – Sharci cusub oo ay soo rogtay Taalibaan , ayaa haweenka looga mamnuucay inay ka soo muuqdaan riwaayadaha ka baxa telefishinnada dalka Afgaanistaan.
Gabdhaha saxafiyiinta ah iyo kuwa warka ka tabiya telefishannada ayaa sidoo kale lagu amray inay xirtaan Xijaab, inkastoo hab-raacyadu aysan sheegin nooca la isticmaalayo.
Weriyeyaasha ayaa sheegaya in qaar ka mid ah xeerarka ay yihiin kuwo aan caddeyn oo ay ku habboon yihiin in la sharraxo.
Taalibaan ayaa la wareegtay awoodda Afgaanistaan ​​bartamihii bishii Ogoosto, waxaana dad badan ay ka cabsi qabaan in ay si tartiib tartiib u soo rogayaan xayiraado adag.
Kooxda islaamiga ah ee la wareegtay gacan ku heynta kadib bixitaanka ciidamada Mareykanka iyo xulafadiisa, ayaa ​​islamarkiiba ku amray gabdhaha iyo haweenka dhalinyarada ah in ay guryahooda joogaan oo aysan iskuulada aadin.
Xilligii ay horey tallada dalka u hayeen ee sagaashamaadkii, ayaa haweenka waxaa laga mamnuucay waxbarashada iyo goobaha shaqada.
Nidaamkii ugu dambeeyay ee tilmaamaha Taalibaan ay soo rogeen ee la siiyay kanaalada telefishinnada Afgaanistaan, ayaa qeexaya sideed xeer oo cusub.
Waxaa ka mid ah, mamnuucidda filimada loo arko inay ka soo horjeedaan mabaadi’da Shareecada Islaamka ama sharciga iyo qiyamka Afgaanistaan, halka muuqaalka ragga ee muujinaya qaybaha jirka ay mamnuuc tahay.
Telefishinada Afqaanistaan ​​ayaa soo bandhigaya inta badan riwaayado ajnabi ah oo ay sameynayaan jilayaal dumar ah.
Xubin ka tirsan urur ay leeyihiin suxufiyiinta Afgaanistaan ​​ku sugan oo lagu magacaabo Xujjatullah Mujaddedi, ayaa sheegay in ku dhawaaqista xayiraadaha cusub ay tahay mid lama filaan ah.